Okwu nke Iji - Mobhax
Site nchọgharị na anyị na website ị na-ekweta anyị Usoro ojiji
Ị na-eji anyị website na gị onwe gị n'ihe ize ndụ. Ojiji nke anyị ọdịnaya a na-eme na gị onwe gị ezi uche na ihe ize ndụ na na ị ga-nanị maka ihe ọ bụla mebiri na kọmputa gị usoro ma ọ bụ ọnwụ nke data nke na-esite na ojiji nke anyị ọdịnaya. Ị na-aghọta na anyị website abụghị dara iwu maka ihe ọ bụla kpọmkwem ma ọ bụ anọ mmebi.
Ọ dịghị onye nke ọdịnaya ọkọnọ na anyị na saịtị na-kwadoro na sava anyị.
Anyị na-bụghị maka atọ ndị ọzọ weebụsaịtị jikọtara ma ọ bụ kwuru na anyị website.
Ị na-adịghị ekwe ka yiri ma ọ bụ bulite anyị ọdịnaya ọ bụla. Ị pụrụ nanị iji ya maka onye na-abụghị nke azụmahịa were. Ị nwere ike laa azu engineer ma ọ bụ de-ide ihe ọ bụla nke anyị ọdịnaya n'ụzọ ọ bụla. Ọdịnaya a na-nyere maka izi nzube naanị.
E nweghị ndị na di n'ihi na ọdịnaya na anyị website. All omume gị na-rụrụ na gị onwe gị ezi uche.
Anyị ọrụ na onye-kere ọdịnaya na-kere-abụghị nke azụmahịa na-abụghị uru izi nzube.
Ị na-adịghị ekwe ka anyị jiri ọdịnaya na ukara sava-emerụ ha usoro ojiji. Ị ibu ọrụ site na-eme otú.
Ị nwere ike iji ihe ọ bụla nke a na website si ọdịnaya na-enweghị nkwenye site onye nchịkwa. Ọ bụrụ na ị na-eme iji anyị na website si ọdịnaya na-enweghị nchịkwa nkwenye, ị ga-atụba maka ọ bụla mebiri mere site na iji ya.
All osụk guest post ma ọ bụ ọrụ ga-aghọ iwu anyị onwunwe. Ị ga-atụfu niile ikike ka isiokwu. Anyị nwere ikike mgbe post n'ụzọ ọ bụla na-enweghị ngosi.
Nke a blog e kere maka izi nzube naanị.
E nweghị file hosed na ihe nkesa na anyị nnọọ na-enweghị akara na ha.
All ụghalaahia bụ nwebisiinka nke ndị nwe ha.
Gbanwee gaa Okwu eji
The admin mee ikike mgbe ọdịnaya nke nkwupụta a n'oge ọ bụla, na anyị uche.
Nsogbu Of Clans Hack Ọ dịghị Survey Ọ dịghị Download Mac Mar 24, 2016